I-Prid The Magic Cottage Luxury Terrace Room - I-Airbnb
I-Prid The Magic Cottage Luxury Terrace Room
Sicela ufunde imininingwane yendlu ngaphambi kokubhukha.
Ngiye nganikwa uMbungazi Ovelele we-Airbnb izikhathi ezingu-26 zilandelana.
Ngigonyiwe ngokumelene ne-Covid.
I-inthanethi esheshayo ilungele yonke imisebenzi yomsebenzi.
I-Magic Cottage iyindawo yokuhlala futhi uRosie uhlala kuleyo ndawo.
Umndeni wamakati anobungane kakhulu uhlala lapha.
NgingumNgisi futhi nginikezwe uMbungazi Ovelele we-Airbnb izikhathi ezingu-26 zilandelana.
Nginamakamelo amabili e-The Magic Cottage.
Ikamelo le-Luxury Terrace eliphezu kwesitezi kanye ne-The Garden Room esesitezi esiphansi.
Indlu ye-Kicsi engadini icelwa kuphela.
Bhukha iholide lakho lokuphumula noma 'Sebenza Ekhaya' ube kude nesiphithiphithi nomsindo wedolobha endaweni yami yokuphumula ethokomele neyamukelayo.
Ngine-inthanethi esheshayo efanelekela i-Zoom, i-Zoom kanye nezingcingo zomhlangano webhizinisi ezisebenza kuyo yonke indawo kuhlanganise nama-hammock.
Nginemibhede engu-2 eyengeziwe yezingane.
Sicela usho esicelweni sakho sokubhukha uma ungathanda lokhu kufakwe ekamelweni. Kukhona imali eyengeziwe engu-15 Euro ubusuku ngabunye, ngombhede ngamunye.
I-Magic Cottage iyindawo yokuhlala yokuziphekela etholakala edolobhaneni lase-Ocna de Jos engamakhilomitha angu-3 ukusuka e-Praid kanye ne-Salt Mine edumile, i-Salt Valley ne-The Praid Live Butterfly House, imizuzu engu-20 nje ukusuka e-Sovata ne-B Bear Lake yayo enhle, ama-spa kanye nezindawo eziningi zokudlela.
Idolobhana lobuciko lokubumba lase-Corund lingamakhilomitha angu-5 kanye nezindawo zokuheha ezifana ne-Straw Hat Museum, i-Middle Statue ne-Mini Transylvania Park konke kuphakathi kokushayela okulula.
Imininingwane ephelele yezivakashi inikezwa ebhokisini egumbini.
Yindawo ekahle kakhulu yabantu abashadile, abahamba bodwa besifazane, imindeni emincane nabantu 'abasebenzela ekhaya'.
I-inthanethi esheshayo iyatholakala amahora angu-24 mahhala.
Lapho isisendlini yokugembula edolobhaneni, isilondoloziwe ekudatshulweni futhi yalungiswa ngesitayela sendabuko kodwa sesimanje sezwe esinemininingwane eminingi eyengeziwe kanye nokunethezeka okuncane.
I-Magic Cottage inikeza ukuthula nokuzola ngokuphelele, kude nesixuku, endaweni emangalisayo yasemaphandleni yedolobhana elinobungane eligcwele ubuhle bendawo, ukwamukela abantu bendawo kanye nokuhambahamba okuhle okunezindawo ezinhle ukusuka emnyango.
Izivakashi ziyelulekwa ukuthi zibe nemoto yazo.
Isitezi esiphezulu sale ndlwana eneminyaka eyikhulu sishintshiwe saba ikamelo lezivakashi elivulekile kakhulu, elikhanyayo nelisesitayeleni elinemibala yakudala enikeza ukuthula nobumfihlo.
Ikamelo linethala lalo langasese elibheke engadini nasehlathini ngaphesheya.
Izivakashi zinikezwa izikhiye zekamelo kanye namasango angaphambili futhi zingafika futhi zihambe ngokuthanda kwazo.
Ikamelo lokulala linombhede omkhulu weNdlovukazi ogqoke ibhuloho elihle elenziwe ngezandla elinamashidi ombhede ophrintiwe wase-India kanye nemicamelo emincane ye-feather ne-duvet
Ngisebenzisa i-goose down duvet ebusika kanye nama-quilts athandekayo aseNdiya ehlobo.
Kukhona ibhokisi lama-drawer wezingubo zakho zokugqoka, usofa, isihlalo, amatafula aseduze kombhede, izibani zokufunda kanye nedeski elincane le-laptop nesihlalo egumbini.
Kunamahhuku alengayo ngemuva komnyango wegumbi lokugezela.
Indawo ifudunyezwe ama-radiator kagesi.
Kunesiqandisi, iketela elisebenza ngogesi nomshini wekhofi ekamelweni kanye netiye elikhethiwe, ikhofi noshukela onsundu nomhlophe kuhlinzekwa etreyini futhi ubisi olusha lusefrijini. Ibhodlela lelitre lamanzi amancane liyatholakala nasegumbini.
Izinhlobo zezincwadi, omagazini bokuhlobisa kanye ne-Chess, i-Backgammon, i-Scrabble, i-Genga namakhadi okudlala anikezwa ukuze izivakashi ziphumule.
Ikamelo lokugezela likanokusho likanokusho liziqhayisa nge-slipper emangalisayo eneshawa ebanjwe ngesandla, umcengezi wokuwasha ne- loo. Izinto zangasese kanye ne-sandle gel yokugcoba kuhlinzekwa njengoba kunuka kamnandi kasawoti bethu bokugeza bendawo kanye nomshini wokomisa izinwele.
Uma usebenzisa wonke amanzi ashisayo ethankini sicela uvumele isikhathi sokufudumeza amanzi ashisayo ukuba afudumeze amanzi phakathi kwegumbi lokugeza nama-shower.
Izembatho zokugqoka ukotini zaseNdiya zilenga ngemuva komnyango wegumbi lokugezela.
Izambulela ziyahlinzekwa futhi uma izivakashi zizidinga kanye namabhodlela amanzi ashisayo ukuze zifake ngaphakathi kwe-Jamper yakho uma ufisa ukusebenzisa ithala ngobusuku be-chiillier.
Kokubili ikamelo lokulala negumbi lokugezela lihlotshiswe ngamagugu avela ekuhambeni kukaRosie, ukuxuba okuhlukahlukene kwezinto zakudala zaseNdiya, zaseBrithani nezaseHungary.
Izibuko zewayini, amaqweqwe kanye nokokuvula ibhodlela kuhlinzekwa ethafeni ethala elinesitsha se-Magic Cottage Walnuts emnandi.
Amamethi e-Yoga anikezwa izivakashi eziwusebenzisayo ngesikhathi sokuhlala kwazo.
Izivakashi zamukelekile ukusebenzisa ikhishi lami phakathi kuka-12 no-2pm futhi kusuka ku-7 kuya ku-10 kusihlwa uma zifuna ukuziphekela.
Isidlo sasekuseni esilula nesinambithekayo se-vegan sinikezwa phakathi kuka-8 no-10 ekuseni.
Kunemibhede emibili ye-hammock engadini ngesimo sezulu esifudumele kanye nomgodi womlilo wokupheka noma ukuhlala nje nxazonke.
Kunezitolo eziningana ezivamile eziqhele ngebanga lokuhanjwa ngezinyawo ukusuka endlwaneni elawulwa abantu bendawo abanobungane abakhuluma kokubili isi-Hungary nesi-Romania.
Kunendawo yokupaka yamahhala ngaphandle kwendlu.
Isikhumulo sezindiza i-Tirgu Mures sisekude ngemizuzu engu-45.
Amamitha okugcina omgwaqo wedolobhana ngumgwaqo ovamile wezwe lase-Transylvanian.
Umndeni wamakati anobungane kakhulu uhlala e-The Magic Cottage.
Sicela uqhubekele phambili futhi ubhukhe uma ungathanda.
Isikhathi sokungena singu-4 ntambama futhi
isikhathi sokuphuma ngu-10 am. Siyabonga.
'Siyakwamukela endlini yami.
Ngena ngokukhululekile. Hamba ngokuphepha bese ushiya okuthile kwenjabulo olethayo'.
Ukuthula nokuzola. Idolobhana elinabaningi abahlali abasebenzisa izithuthi ezidonswa amahhashi kodwa eliseduze kakhulu namadolobhana adumile ase-Praid, e-Sovata kanye nedolobhana lezandla lase-Corund.
Kunezitolo ezincane zokuthenga ukudla edolobhaneni kanye namamakethe amakhulu amakhulu e-Sovata.
Kukhona ifolda egumbini enemininingwane egcwele yezivakashi ngokubuka indawo, izindawo zokudlela nezitolo zokuthenga njll.
U-Rosie uyatholakala ukuze asize izivakashi.